समयमै निर्वाचन गर्न प्रयासरत छौँ
प्रकाशित मिति: 2015/08/30
कुलबहादुर गुरुङ, द्धितीय उपाध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)
कुलबहादुर गुरुङ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)को वर्तमान द्धितीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । टानको वर्तमान कार्यकाल सकिन लागेको तर, नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचन घोषणा हुन नसकेकोलगायतका संस्थागत तथा समसामयीक विषयमा गन्तब्य नेपाल न्यूजले गरेको संवाद प्रस्तुत छ :
टानको कार्यसमिति संस्थाको निर्वाचन पर सार्ने मनस्थितिमा छ भन्ने कुरा आएको छ, यस्मा तपाइँको संस्थागत धारणा के छ ?
यो गलत छ ।
हामी गर्नुपर्ने कार्य र जिम्मेवारीहरुमा अत्यन्त सचेत छौँ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पनि वर्तमान कार्यसमिति एक छ । यसका लागि कामहरु भैरहेका छन् । तथापी, यसका बारेमा आधिकारीक धारणा चाँडै नै बस्न गईरहेको कार्यसमिति बैठकले सार्वजनिक गर्नेछ ।
संस्थाको आन्तरिक कामहरु तिव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । अहिले संस्थाका आन्तरिक मामिलाहरुलाई मिलाउने सवालमा कामहरु भैरहेका छन् । तसर्थ सेप्टेम्बर अन्तिम साता नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी हामी प्रयासरत छौँ । परिस्थितिवस् केही समय पर गयो भने पनि अन्यथा नमानौँ । यस मामिलामा यो कार्यसमितिले केही लाभ लिनु छैन् । उसो त पर्यटकीय सिजन पनि आईसकेको छ, पर्यटकीय संघसंस्था र व्यवसायी, मजदुरहरुका लागि यो महत्वपूर्ण समय भएकाले यस्तो अवस्थामा न नयाँ कार्यसमिति नत पुरानैले पनि खास काम गर्न सक्छन् ।
टानले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न सकेन भन्ने आरोप तपाइँहरुमाथी लाग्दै आएको छ, के टानले आफ्नो कार्य क्षेत्र विर्सिएको हो ?
होईन, हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएका छैनौँ । भूकम्पपछाडी हामीले भूकम्प पीडित र प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत र उद्दारका कामहरु सम्पन्न गर्‍यौ । जहाँसम्म पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा टानले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ, यसमा दुई महिना त प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन, त्यसपश्चात त हामी निरन्तर पर्यटन पुनरुत्थानका लागि काम गरिरहेकै छौँ । विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरुबाट प्राप्त सहयोगहरुलाई प्रभावी क्षेत्रमा पुर्‍यउने तथा सोकार्य सम्पन्न गर्नका लागि पर्यटन मजदुरहरुलाई अधिकतम परिचालन गर्‍यौ ताकि यसबाट उनिहरुले लाभ पाउन ।
हामी पर्यटन पुनरुत्थानका लागि निरन्तर रुपमा लागि नै रहेका छौँ । यसक्रममा म आफैँ भर्खर रुबी भ्यालीबाट फर्केको छु, हामीले त्यस क्षेत्रको ‘एसेस्मेन्ट’ गरेर फर्केका छौँ, यसको विस्तृत प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । मनास्लु र सोलुखुम्बुको ‘लोअर भ्याली’ को अवस्थिति र आवश्यक कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि त्यतातिर पनि जान लाईरहेका छौँ, लाङटाङ क्षेत्रको अवस्थितिको बारेमा पनि अध्ययन भएको छ । प्रभावित क्षेत्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काउनका लागि स्थानियसमेतको सहभागितामा काम सम्पन्न गर्न र सरकारी सहयोग जुटाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
हामी आराम गरिरहेका छैनौँ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गर्नसक्ने हदमा गतिविधि गरिरहेका छौँ, हामीले ‘मिडियावाजी’ नगरेकोमात्र हो ।
पछिल्लो समय पर्यटन बोर्डसँग टानको सम्बन्ध चिसिएको कुरा आएका छन्, के खटपट भएको हो, बोर्डसँग ?
पर्यटन बोर्डसँग टानको सम्बन्ध सुमधुर छ ।
हामीले संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी) मार्फत एक समय पर्यटन बोर्डमा आन्दोलन । यसले प्रभाव सृजना गरिसकेको छ । र हामीले पनि हामीबाट भएका केही कमजोरीहरुलाई सच्याउन लागिरहेका छौँ । पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावी कुनै एकले अर्कालाई ‘बाईपास’ गरेर जान सक्ने अवस्था छैन् । एकापसमा मिलेर आगाडी बढनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यहि मार्गमा हामी लागिरहेका छौँ । हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ ।
टानमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका कुराहरु यदाकदा उठने गर्छ, सो विषयलाई संस्थाको निर्वाचन मिति अहिलेसम्म नतोक्नुसँग पनि जोडेर हरिएको छ यसप्रति तपाइँको जवाफ के छ ?
हामी पारदर्शी छौँ । हामी विधि र पद्धतीअनुरुप नै काम गरिरहेका छौँ । स्वयंसेवीको रुपमा हामी कार्यसमितिमा आवद्ध सदस्यहरु दिनरात खटेका छौँ । यसलाई नदेख्नु /नबुझ्नु आरोप लगाउनेहरु कै कमजोरी हो । हामी जनि पनि संस्थामा आवद्ध छौँ, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अपचलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन्, हामी आफैँ सक्षम छौँ । वर्तमान कार्यसमितिले धेरै राम्रा कामहरु गरेको छ, यो सफल टीम हो ।
हाल टानको द्धितीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र भावी नेतृत्वमा इच्छा जाहेर गरिरहँदा निर्वाचनको विषयमा बजारमा देखिएका गतिविधि÷क्रियाकलापहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ नि !
टानको भावी नेतृत्वका लागि जति पनि साथीहरुले इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ, यो उहाँहरुको अधिकार हो । यहाँ कुनै अस्वभाविक कुरा छैन् । तर केही हतारोपन पक्कै देखिन्छ । निर्वाचनकै विषयलाई अतिरञ्जित गरेर भड्किलो, खर्चिलो बनाउने हिसावले अनावश्यक गतिविधि र क्रियाकलाप गलत छ ।
जहाँसम्म मैले भावी नेतृत्वमा इच्छा जाहेर गरेको कुरा छ, म विगत झण्डै अढाई दशकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध छु, एक दशकभन्दा बढी समयदेखि टानमा आवद्ध छु र यो कार्यसमितिमा पनि सर्वाधिक मतले द्धितीय उपाध्यक्षमा चुनिएर आएको हुँ । आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दार ढंगले सम्पन्न गर्दै आएको छु । यस हिसावले म यो मानेमा इच्छुक छु कि संस्थाले र समग्र पर्यटन क्षेत्रले मेरो आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा म नेतृत्व लिन तयार छु, तर म उम्मेदवारी घोषणा गर्दैचाँहि हिँडदिन ।
अन्तमा, जेटीसीसीको विषयले पर्यटन क्षेत्रमा दुईखाले कित्ता निर्माण गरेको छ, एकथरी यसको पक्ष अर्को विपक्षमा उभिएका छन्, यो विषय खास के हो ?
पर्यटन व्यवासयीहरुलाई एक बनाई समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेर स्थापित संस्था हो, जेटीसीसी । कुनै समय यहि संस्थामार्फत एक भएका व्यवायी साथीहरुविच फाटो आएको छ, केही संस्था र व्यवसायीहरु बाहिरिनु भएको छ ।
प्रत्येककोे आ–आफ्नो बुझाई हुन्छ, उहाँहरुको पनि आफ्नै बुझाई होलान्, यसबारेमा म केही भन्न चाहन्न । अहिलेसम्म जे–जे भयो, अव सबैले आफ्ना गल्ती÷कमजोरी स्विकारौँ । गल्ती सुधारेर अगाडी बढनुपर्छ ।
तर, म जेटीसीसीप्रति सन्तुष्ट छु ।